Toyota Kluger 2006 အား သင်္ဃန်းကျွန်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Ko Wai Phyo
Kluger 2006 မော်ဒယ် S Grade.7ယောက်စီး ခုံသုံးတန်း. 2400cc. 2WD. YGN License. 3N/****. Japan TV with မျဉ်းကွေးပါ Back Camera. DVD/HDD။ Original Kilo အမှန် 65,000။Original ဂျပန် skirt ပတ်လည် with Fog Lamp. တာယာလေးလုံး Dunlop အသစ်စက်စက်။ Air purifier လေသန့်စက်ပါ။ ပလပ် လေးလုံး အသစ်။ အင်ဂျင်ဝိုင် အသစ်။အောက်ပိုင်း အားလုံး စစ်ဆေး/ကောင်း။အော်ထိုင်ခုံ အမဲပေါ်တွင် JDM ခုံသုံးတန်းနဲ့ လက်တင်ပါ လည်သာထိုင်ခုံစွပ်ပြီး လက်တင်စီးရန် အသင့်။ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်း။ **** CarsDB တွင်ကြော်ငြာထားသောကားဟုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ****